ဆားပုလငျးမောငျဗွိ နှငျ့ ရှမှေ ကွေးဖွဈသှားသောအမှု | Opinion Leaders
ကြှနျုပျသညျလညျး ရဒေီယိုမှလာနသေော ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျောကွီး၏ တရားတျောမြားကို နှလုံး သှငျးလကျြ ခြဲတှကျနလေသေညျ။ကြှနျုပျတို့ နှဈဦး ထိုကဲ့သို့ ဇိမျကနြသေညျကို မနာလို မရှုစိမျ့ နိုငျ သညျ့အလား ကိုမောငျဗွိ ၏ ဖုနျးသံသညျ တတှီတှီ မွညျလာလေ၏။ကိုမောငျဗွိ လညျး ဖုနျးကို ကိုငျလကျြ အိမျသာထဲဝငျသှားလသေညျ။မကွာမီ ပွနျထှကျလာပွီးနောကျ ''ဒေါကျတာရေ…..ညနေ သုံးနာရီကရြငျ ဂြူဗလီဟောမှာ ဘင်ျဂလားပွညျကလာတဲ့ မကျြလှညျ့ပညာရှငျ ဂြိုကာ ရဲ့ မကျြလှညျ့ပှဲရှိသဗြ..အဲ့ဒါ ကြုပျတို့ သှားကွညျ့ကွမယျ''
မိုးရာသီဖွဈသညျ့အလြောကျ ပှဲလမျးသဘငျမြား ပါးရှားလှသညျဖွဈရာ ကြှနျုပျလညျး ပှဲငတျ လှသဖွငျ့ ဝမျးပနျးတသာဖွဈသှားလသေညျ။ညနေ နှဈနာရီခှဲသောအခါ ကြှနျုပျနှငျ့ ဆားပုလငျးမောငျဗွိ တို့သညျ ပှဲကငျြးပရာ ဂြူဗလီဟောသို့ ဂရပျအငှားယာဉျဖွငျ့ ထှကျခှာခဲ့လသေညျ။
ပှဲတှငျ မကျြလှညျ့ပညာရှငျ ဂြိုကာသညျ ဝီစကီဝမျးလီတာ ပုလငျးကွီးအား ပါးစပျမှ ဝါးစားပွပွီး ဖငျထဲမှ ပွနျထုတျပွခွငျး၊ အုတျနီခဲတဈလုံးအား ဖငျထဲသို့ ထညျ့ကာ ပါးစပျမှ ပွနျထုတျပွခွငျး စသညျ အံသွဖှယျပညာရပျမြားကို ပွသလသေညျ။
ဆရာဂြိုကာ သညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ၊ ဒုက်ခသညျစခနျးမှတဆငျ့ ကြျောကွားလာသညျ့ ကမ်ဘာသိ ပညာရှငျ တဈဦး ဖွဈသညျ့အတှကျ ကြှနျုပျမှာ လှနျစှာမှ ခြီးကြူးမိပသေညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ ကြှနျုပျ၏ ဘေး၌ ထိုငျနသေော ကိုမောငျဗွိ သညျ မကျြလှညျ့ပှဲကို စိတျဝငျတစား ကွညျ့နရောမှ ကြှနျုပျဘကျသို့ လကျတို့ပွီး ''ဒေါကျတာက ဘင်ျဂလားက ပညာရှငျကို သိပျအံသွနေ တယျထငျတယျ'' ဟု ဆိုလိုကျလသေညျ။
ကိုမောငျဗွိသညျသူတဈထူး၏စိတျထဲကအတှေးမြားကိုပငျသိနိုငျသညျ့သူတဈဦးဖွဈကွောငျး ရှေးမဆှကတညျးက ကြှနျုပျသိပွီးသားဖွဈသညျ့အလြောကျ ထူးပွီး မအံသွတော့ခြေ။
သို့သျော ကိုမောငျဗွိ ဆကျပွောသောစကားကွောငျ့ ကြှနျုပျမှာ အံသွတကွီးဖွဈရခသြေညျ။
''ဆရာဂြိုကာ က ပုလငျးတှေ စားပွတာ ခငျဗြားက အံသွနတေယျ။ ကြုပျတို့ဆီမှာ ပုလငျးတငျ မက ပုလငျးရော၊ ပုံး တှပေါ ဝါးပွ စားပွတဲ့ ပညာရှငျတှအေမြားကွီးမှ အမြားကွီးဗြ''
''သွျော..ဒေါကျတာရယျ..ပုလငျးတှေ၊ ပုံးတှစေားပွတိုငျး မကျြလှညျ့ဆရာမှတျနတေယျ။ မယုံ ဒီနထေု့တျသတငျးစာတှေ ဝယျဖတျကွညျ့စမျးပါ။
ဘလူးလဘေယျပုလငျးနဲ့ ပုံးပေါငျး တဈရာကြျော စားပွတဲ့ တရားရေးခြုပျ တို့၊ ဂိုးလျလဘေယျ ပုလငျး နဲ့ ပုံးပေါငျးသုံးရာကြျောစားတဲ့ တရားသူကွီးတို့..တှရေ့ပါလိမျ့ မယျ..အောငျမယျ… ပါတိတျထမီနဲ့ ပုံးငါးဆယျလောကျစားပွတဲ့ အမြိုးသမီး ပညာရှငျတောငျ ပါသေးဗြား''
ကွားမွငျဗဟုသုတနှံ့စပျလှသော ကိုမောငျဗွိ ၏ စကားကို ကွားရသညျ့အခါ ကြှနျုပျမှာ ကိုယျ့နိုငျငံတျော ကွီးမှ ထိုမြှု ထူးခြှနျသော အစားပညာရှငျမြား ထှကျသညျ့အတှကျ မြားစှာ ဂုဏျယူမိလသေညျ။
ဂြူဗလီဟောပှဲပွီးသောအခါ ကြှနျုပျနှငျ့ ကိုမောငျဗွိ သညျ ဆူးလဘေုရငျမပနျးခွံရှမှေ့ တလေဂူမလေး ဟမျမလာ ရောငျးသညျ့ တဈပှဲ သုံးရာတနျ ဆမူဆာသုပျကို မွိနျရညျရှကျစားသောကျကွလသေညျ။
ထိုသို့ စားသောကျပွီးနောကျ ကိုမောငျဗွိ က
''ဒေါကျတာရေ…နဝေငျရီပြိုးလေးတော့ ဖွဈနပွေီဗြ..ဒီကနေ ရှတေိဂုံကိုသှားရငျ မှောငျစပြိုးဖွဈနမှောပဲ..သှားကွရအောငျ''
ကြှနျုပျနှငျ့ ကိုမောငျဗွိ တို့သညျ ရှတေိဂုံဘုရားဘကျသို့ အငှားယာဉျဖွငျ့ ထပျထှကျလာခဲ့လသေညျ။
''အိုငျဆေး….ကိုမောငျဗွိ…ထူးထူးခွားခွား ဘုရားတှဘောတှသှေားလို့..ခငျဗြား..ဘာသာရေးဘကျ လှညျ့ပွနျပွီလား''
ကိုမောငျဗွိ က ကြှနျုပျအား ပလကျစတဈအိတျတဈခု ထုတျပွလသေညျ။
''ဘုရားသှားတာနဲ့ အဲ့ဒီ ပလတျစတဈအိတျနဲ့ ဘာဆိုငျတုနျးဗြ''
''ဆိုငျသပေါ့..ဒေါကျတာ..ဒါ ခုန ဆမူဆာသုတျသညျ ဟမျမလားဆီက တောငျးလာတဲ့
အိတျ… ကြုပျတို့ ရှတေိဂုံပျေါရောကျတာနဲ့ မှောငျစပြိုးပွီဗြ..ဆလိုကျတှမေဖှငျ့ခငျ အလငျးရောငျမှောငျဝါးဝါးမှာ ဂွိုလျတိုငျတှမှော ရသေပ်ပါယျသလိုလိုနဲ့ ဖယောငျးတိုငျတှေ လိုကျခှာကွမယျလဗြော…မိုးကုနျရငျ မီးက စပကျြတော့မယျ..ဒီတော့ ကြုပျတို့ ဖယောငျးတိုငျဖိုး သကျသာတာပေါ့ဗြ'' ထိုသို့ အကှကျကြျောမွငျပွီး ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးလှသော ကိုမောငျဗွိ သညျ စီးပှားရေးသမား လုပျလငျြ အောငျမွငျမညျမုခြ ဖွဈသညျဟု ကြှနျုပျ အာမခံပါသညျ။
ယခုတော့ ကိုမောငျဗွိ သညျ စုံထောကျတဈယောကျဖွဈနသေညျ က မွနျမာ့စီးပှားရေးလောက အတှကျ နဈနာလှခသြေညျဟု ထငျမွငျမိပါ၏။
ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးသား ရှတေိဂုံစတေီတျောပျေါ တကျရောကျလာသောအခါ အလှနျထူးဆနျးသော အဖွဈနှငျ့ ကွုံရလသေညျ။
မှောငျခါစ ကောငျးကငျနောကျခံဖွငျ့ စတေီတျောကွီးမှာ ငှကျပြောဖူးအောကျဘကျရှိ ဖောငျးရဈသညျ လုံးဝကှယျပြောကျလကျြရှိ၏။
''ဒုက်ခပါပဲ..ကိုမောငျဗွိ ရေ…ခငျဗြား..ရှတေိဂုံဘုရားဖူးလာတဲ့ မဖဲဝါနဲ့ ကိုစံမှဲ့ တို့မောငျနှမ ဇာတျ ကွားဖူးတယျမဟုတျလား။ အငျးသူကွီးကို စံမှဲ့က အကုသိုလျတှမြေားလှနျးလို့ ဘုရားကွီး ကှယျနတောလေ..အခုလညျး ကြုပျတို့ နှဈယောကျ အကုသိုလျ နညျးနညျးမြားနလေို့ ဘုရားကွီးက အလယျကနေ ကှကျပွီးပြောကျနတောထငျတယျဗြာ''
ကြှုနျုပျ၏ အထိတျတလနျ့စကားကို ကိုမောငျဗွိက မခိုးမခနျ့ပွုံးရငျး သူ့ ထုံးစံအတိုငျး ဘယျဘကျ လကျညိုးဖွငျ့ တငျပါးကို ကုတျနလေသေညျ။
''အငျး..ဒီကိစ်စ..ဒေါကျတာထငျသလို မဟုတျလောကျပါဘူး..အရငျက ကြုပျတို့ ထကျ အကုသိုလျ အပုံကွီးမြားတဲ့ အဝိစိဂြိုးကပျကွီးမြားတောငျ ဘုရားပျေါတကျ ထီးတှတေငျ ဘာတှတေငျ လုပျကွသေး တာပဲ..ကြုပျ တို့ ဘုရားလူကွီး
ထိုသို့နှငျ့ ကြှနျုပျတို့နှဈဦးသား ဘုရားလူကွီးရုံးခနျးဆီသို့ ထှကျလာကွလသေညျ။ဂေါပက ရုံးခနျး သို့ ရောကျသောအခါ ယောဂီဝမျးဆကျဝတျထားပွီး အငျမတနျမှ ကွညျညိုစရာကောငျးသော အဘကွီးတဈဦးသညျ ဘုရားကွီးဘကျ မကျြနှာမူလကျြ..မကျြစိကို မှိတျကာ ပါးစပျမှ လှုပျစိလှုပျစိနှငျ့ ရှတျဖတျနလေသေညျ။
ကြှနျုပျတို့လညျး သူအာရုံပကျြမညျဆိုးသဖွငျ့ နဘေးနားခုံတှငျ အသာဝငျထိုငျကာ သူရှတျဖတျမှုပွီးသညျအထိ စောငျ့နေ၏။
ရှတျဖတျသံ တိုးတိုးလေးဖွဈသဖွငျ့ ကိုမောငျဗွိက အသံကို သခြောနားထောငျရနျ ကြှနျုပျအား အခကျြပွသညျနှငျ့ ကြှနျုပျလညျး ကပျပွီး နားထောငျမိသောအခါ ဘုရားလူကွီးအဘသညျ လှနျစှာမှ ထူးဆနျးသော ဂါထာတဈပုဒျကို ရှတျဆိုနသေညျကို အောကျပါအတိုငျးကွားရပါတော့သညျ။
''ဖယောငျးတငျဒါ…ရှအေမှိုကျတငျဒါ..လငျးနို့ခြေးတငျဒါ..အလှူခံသတ်ေတာ…သတ်ေတာ..တငျဒါ..တငျဒါ..တငျဒါ''အတနျကွာသော အဘသညျ ရှတျဖတျမှုကို ရပျလိုကျပွီး ကြှနျုပျတို့ ဘကျလှညျ့လိုကျလေ သညျ။
''သွျော..ဘယျသူမြားလဲလို့ ကိုမောငျဗွိ တို့ပါလား…..ဘာကိစ်စမြားလဲဗြ''ကိုမောငျဗွိ က စကားမဆိုပဲ..လှမျးမွငျနရေသညျ့ ဘုရားကွီး၏ ဖောငျးရဈမဲမဲ ဆီသို့ သာ လကျညှနျးထိုးပွလသေညျ။
''ဟုတျတယျဗြာ…အဲ့ဒီကိစ်စ ကြုပျတို့လညျး ခေါငျးစားနတောပေါ့….ဖဘှေ့တျပျေါက ပညာရှငျတှေ ကတော့ အမြိုးမြိုးပွောနကွေတာပဲ..အရငျသူတျောကောငျးအဘတှကေ ရှကေို ကွေးတှနေဲ့ ရောပွီး ဂငျြးထညျ့လို့ မညျးကုနျတာ လို့လညျးဆိုတယျ….ရှကေို အပွားခတျရာမှာ နဒေဏျလဒေဏျခံနိုငျ ဖို့ ကွေးရောရတယျဆိုလို့အခြို့ကလညျး အကွောငျးပွလာတယျ..ဘုရားမှာ သူ့ဘာသာသူ ကပျထားတာ သှားခှာတော့ အလှူရှငျတှေ ကဗ်ဗညျးပြောကျပွီးရငျထုမနာဖွဈကွ မယျဆိုပွီး အဘတှရေဲ့ ကြှနျုယုံတျောပညာရှိကွီးတှကေလညျး ဆိုတယျ..ကြုပျတို့ကတော့ ဘာကွောငျ့ရှတှေကေ ကွေးလို မဲကုနျလညျး စဉျးစားမရဘူးဗြာ.. ဒီကိစ်စရဲ့ တရားခံကို ကိုမောငျဗွိ ဖျောလို့ ''
ကိုမောငျဗွိ သညျ တဈစုံတဈရာကို လေးလေးနကျနကျစဉျးစားလငျြ သူလုပျနကေပြုံစံအတိုငျး တငျပါးကို ကောကျလကျြ ဘယျဘကျလကျဖွငျ့ တဗဈြဗဈြကုတျကာ မကျြလုံးကို မှေးစငျးထား၏။
ဘုရားလူကွီးအဘမှာလညျး ကိုမောငျဗွိ ထံမှ အဖွအေား ကွညျညိုသော မကျြလုံးအစုံဖွငျ့ ငေးကာစောငျ့မြှျောနဟေနျတူသညျ။
ခဏ အကွာ တဗဈြဗဈြ ကုတျသံ ရပျသှား၏။
ကိုမောငျဗွိ မကျြလုံးမြား ပှငျ့လာ၏။
''အဘ ပုဂံခတျေက ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဆိုတာ ကွားဖူးလား''
'' ပွဒါးသေ တဆှဝေ .. သံသေ တပွညျဝ ဆိုသလို ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဟာ ပုဂံပွညျကွီးက ရှိသမြှ ကွေးတှကေို ရှဖွေဈစခေဲ့လို့ မုဆိုးမတောငျ ဘုရားတညျနိုငျတယျမဟုတျလားဗြ''
''အခု..ဒီဘုရားကွီးက ရှတှေကေ ပုဂံခတျေက ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ အစှမျးကွောငျ့ ကွေးကနေ ရှဖွေဈသှားတဲ့ ရှတှေဗြေ''
''ဒါက ဒီလိုရှိတယျဗြ….ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ က ကွေးတှကေို ရှဖွေဈအောငျ လုပျတော့ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျစှဲရှိတယျ..အင်ျဂလိပျလိုဆို အိတျစပရကျရာဒိတျပေါ့ဗြာ….အခု အဲ့ဒီ ရှတှေဟော သကျတမျး
ကုနျဆုံးသှားတော့ ကွေးပွနျဖွဈသှားတဲ့သဘောပဲ..ဘယျသူ့မှာမှ အပွဈမရှိပါဘူးဗြာ…. တကယျ့ တရားခံအစဈက ရှငျအဇ်ဇဂေါဏကိုယျတျောကွီးပဲဗြိုး…''
ထိုအခါမှပငျ ဘုရားလူကွီးအဘသညျ သကျပွငျးခလြကျြ..''ကိုမောငျဗွိ ကြေးဇူး ကွီးလှပါတယျဗြာ..ကြုပျတို့ အားလုံး အငွငျးအခုံဖွဈနတေဲ့ ကိစ်စ..ကိုမောငျဗွိ လာမှပဲ ရှငျးသှားတော့တယျ..ကြေးဇူးကွီးလှပါတယျ..မောငျမငျးကွီးသား''
ထို့နောကျတှငျတော့ ကြှနျုပျတို့လညျး ဘုရာလူကွီး ဧညျ့ခံသော မုနျ့ပဲသရစောမြားကို စားသောကျပွီးနောကျ ဘုရားကွီးအား လကျြာရဈ လှညျ့လညျပွီး ဂွိုလျတိုငျအစေ့ ဖယောငျးတိုငျမြားခှာကာ အိမျပွနျခဲ့လတေော့သတညျး။
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ် ဒေါက်တာအဲလက်စ် နှင့် ဆားပုလင်းမောင်ဗြိ တို့သည် အလုံလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)နေအိမ်တွင် ရှိနေကြလေသည်။မိုးကလေးကလည်း တစိမ့်စိမ့်ရွာနေသည်တွင် ဆားပုလင်းမောင်ဗြိ သည် လွန်စွာမှ ထူထဲလှသော စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်အား ခေါင်းအုံးလျက် သူ၏ ဖုန်းထဲ မှ မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးပုံများကို တစ်ပုံပြီး တစ်ပုံး ပြူးပြဲကြည့်ရှုနေ၏။
ကျွန်ုပ်သည်လည်း ရေဒီယိုမှလာနေသော ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားတော်များကို နှလုံး သွင်းလျက် ချဲတွက်နေလေသည်။ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦး ထိုကဲ့သို့ ဇိမ်ကျနေသည်ကို မနာလို မရှုစိမ့် နိုင် သည့်အလား ကိုမောင်ဗြိ ၏ ဖုန်းသံသည် တတွီတွီ မြည်လာလေ၏။ကိုမောင်ဗြိ လည်း ဖုန်းကို ကိုင်လျက် အိမ်သာထဲဝင်သွားလေသည်။မကြာမီ ပြန်ထွက်လာပြီးနောက် ''ဒေါက်တာရေ…..ညနေ သုံးနာရီကျရင် ဂျူဗလီဟောမှာ ဘင်္ဂလားပြည်ကလာတဲ့ မျက်လှည့်ပညာရှင် ဂျိုကာ ရဲ့ မျက်လှည့်ပွဲရှိသဗျ..အဲ့ဒါ ကျုပ်တို့ သွားကြည့်ကြမယ်''
မိုးရာသီဖြစ်သည့်အလျောက် ပွဲလမ်းသဘင်များ ပါးရှားလှသည်ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်လည်း ပွဲငတ် လှသဖြင့် ဝမ်းပန်းတသာဖြစ်သွားလေသည်။ညနေ နှစ်နာရီခွဲသောအခါ ကျွန်ုပ်နှင့် ဆားပုလင်းမောင်ဗြိ တို့သည် ပွဲကျင်းပရာ ဂျူဗလီဟောသို့ ဂရပ်အငှားယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့လေသည်။
ပွဲတွင် မျက်လှည့်ပညာရှင် ဂျိုကာသည် ဝီစကီဝမ်းလီတာ ပုလင်းကြီးအား ပါးစပ်မှ ဝါးစားပြပြီး ဖင်ထဲမှ ပြန်ထုတ်ပြခြင်း၊ အုတ်နီခဲတစ်လုံးအား ဖင်ထဲသို့ ထည့်ကာ ပါးစပ်မှ ပြန်ထုတ်ပြခြင်း စသည် အံသြဖွယ်ပညာရပ်များကို ပြသလေသည်။
ဆရာဂျိုကာ သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့် ကျော်ကြားလာသည့် ကမ္ဘာသိ ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်မှာ လွန်စွာမှ ချီးကျူးမိပေသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ ဘေး၌ ထိုင်နေသော ကိုမောင်ဗြိ သည် မျက်လှည့်ပွဲကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေရာမှ ကျွန်ုပ်ဘက်သို့ လက်တို့ပြီး ''ဒေါက်တာက ဘင်္ဂလားက ပညာရှင်ကို သိပ်အံသြနေ တယ်ထင်တယ်'' ဟု ဆိုလိုက်လေသည်။
ကိုမောင်ဗြိသည်သူတစ်ထူး၏စိတ်ထဲကအတွေးများကိုပင်သိနိုင်သည့်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ရှေးမဆွကတည်းက ကျွန်ုပ်သိပြီးသားဖြစ်သည့်အလျောက် ထူးပြီး မအံသြတော့ချေ။
သို့သော် ကိုမောင်ဗြိ ဆက်ပြောသောစကားကြောင့် ကျွန်ုပ်မှာ အံသြတကြီးဖြစ်ရချေသည်။
''ဆရာဂျိုကာ က ပုလင်းတွေ စားပြတာ ခင်ဗျားက အံသြနေတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ပုလင်းတင် မက ပုလင်းရော၊ ပုံး တွေပါ ဝါးပြ စားပြတဲ့ ပညာရှင်တွေအများကြီးမှ အများကြီးဗျ''
''သြော်..ဒေါက်တာရယ်..ပုလင်းတွေ၊ ပုံးတွေစားပြတိုင်း မျက်လှည့်ဆရာမှတ်နေတယ်။ မယုံ ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေ ဝယ်ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။
ဘလူးလေဘယ်ပုလင်းနဲ့ ပုံးပေါင်း တစ်ရာကျော် စားပြတဲ့ တရားရေးချုပ် တို့၊ ဂိုးလ်လေဘယ် ပုလင်း နဲ့ ပုံးပေါင်းသုံးရာကျော်စားတဲ့ တရားသူကြီးတို့..တွေ့ရပါလိမ့် မယ်..အောင်မယ်… ပါတိတ်ထမီနဲ့ ပုံးငါးဆယ်လောက်စားပြတဲ့ အမျိုးသမီး ပညာရှင်တောင် ပါသေးဗျား''
ကြားမြင်ဗဟုသုတနှံ့စပ်လှသော ကိုမောင်ဗြိ ၏ စကားကို ကြားရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံတော် ကြီးမှ ထိုမျှု ထူးချွန်သော အစားပညာရှင်များ ထွက်သည့်အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူမိလေသည်။
ဂျူဗလီဟောပွဲပြီးသောအခါ ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုမောင်ဗြိ သည် ဆူးလေဘုရင်မပန်းခြံရှေ့မှ တေလဂူမလေး ဟမ်မလာ ရောင်းသည့် တစ်ပွဲ သုံးရာတန် ဆမူဆာသုပ်ကို မြိန်ရည်ရှက်စားသောက်ကြလေသည်။
ထိုသို့ စားသောက်ပြီးနောက် ကိုမောင်ဗြိ က
''ဒေါက်တာရေ…နေဝင်ရီပျိုးလေးတော့ ဖြစ်နေပြီဗျ..ဒီကနေ ရွှေတိဂုံကိုသွားရင် မှောင်စပျိုးဖြစ်နေမှာပဲ..သွားကြရအောင်''
ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုမောင်ဗြိ တို့သည် ရွှေတိဂုံဘုရားဘက်သို့ အငှားယာဉ်ဖြင့် ထပ်ထွက်လာခဲ့လေသည်။
''အိုင်ဆေး….ကိုမောင်ဗြိ…ထူးထူးခြားခြား ဘုရားတွေဘာတွေသွားလို့..ခင်ဗျား..ဘာသာရေးဘက် လှည့်ပြန်ပြီလား''
ကိုမောင်ဗြိ က ကျွန်ုပ်အား ပလက်စတစ်အိတ်တစ်ခု ထုတ်ပြလေသည်။
''ဘုရားသွားတာနဲ့ အဲ့ဒီ ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ ဘာဆိုင်တုန်းဗျ''
''ဆိုင်သပေါ့..ဒေါက်တာ..ဒါ ခုန ဆမူဆာသုတ်သည် ဟမ်မလားဆီက တောင်းလာတဲ့
အိတ်… ကျုပ်တို့ ရွှေတိဂုံပေါ်ရောက်တာနဲ့ မှောင်စပျိုးပြီဗျ..ဆလိုက်တွေမဖွင့်ခင် အလင်းရောင်မှောင်ဝါးဝါးမှာ ဂြိုလ်တိုင်တွေမှာ ရေသပ္ပါယ်သလိုလိုနဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေ လိုက်ခွာကြမယ်လေဗျာ…မိုးကုန်ရင် မီးက စပျက်တော့မယ်..ဒီတော့ ကျုပ်တို့ ဖယောင်းတိုင်ဖိုး သက်သာတာပေါ့ဗျ'' ထိုသို့ အကွက်ကျော်မြင်ပြီး ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းလှသော ကိုမောင်ဗြိ သည် စီးပွားရေးသမား လုပ်လျင် အောင်မြင်မည်မုချ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် အာမခံပါသည်။
ယခုတော့ ကိုမောင်ဗြိ သည် စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည် က မြန်မာ့စီးပွားရေးလောက အတွက် နစ်နာလှချေသည်ဟု ထင်မြင်မိပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးသား ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ် တက်ရောက်လာသောအခါ အလွန်ထူးဆန်းသော အဖြစ်နှင့် ကြုံရလေသည်။
မှောင်ခါစ ကောင်းကင်နောက်ခံဖြင့် စေတီတော်ကြီးမှာ ငှက်ပျောဖူးအောက်ဘက်ရှိ ဖောင်းရစ်သည် လုံးဝကွယ်ပျောက်လျက်ရှိ၏။
''ဒုက္ခပါပဲ..ကိုမောင်ဗြိ ရေ…ခင်ဗျား..ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးလာတဲ့ မဖဲဝါနဲ့ ကိုစံမှဲ့ တို့မောင်နှမ ဇာတ် ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား။ အင်းသူကြီးကို စံမှဲ့က အကုသိုလ်တွေများလွန်းလို့ ဘုရားကြီး ကွယ်နေတာလေ..အခုလည်း ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက် အကုသိုလ် နည်းနည်းများနေလို့ ဘုရားကြီးက အလယ်ကနေ ကွက်ပြီးပျောက်နေတာထင်တယ်ဗျာ''
ကျွုန်ုပ်၏ အထိတ်တလန့်စကားကို ကိုမောင်ဗြိက မခိုးမခန့်ပြုံးရင်း သူ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်ဘက် လက်ညိုးဖြင့် တင်ပါးကို ကုတ်နေလေသည်။
''အင်း..ဒီကိစ္စ..ဒေါက်တာထင်သလို မဟုတ်လောက်ပါဘူး..အရင်က ကျုပ်တို့ ထက် အကုသိုလ် အပုံကြီးများတဲ့ အဝိစိဂျိုးကပ်ကြီးများတောင် ဘုရားပေါ်တက် ထီးတွေတင် ဘာတွေတင် လုပ်ကြသေး တာပဲ..ကျုပ် တို့ ဘုရားလူကြီး
ထိုသို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသား ဘုရားလူကြီးရုံးခန်းဆီသို့ ထွက်လာကြလေသည်။ဂေါပက ရုံးခန်း သို့ ရောက်သောအခါ ယောဂီဝမ်းဆက်ဝတ်ထားပြီး အင်မတန်မှ ကြည်ညိုစရာကောင်းသော အဘကြီးတစ်ဦးသည် ဘုရားကြီးဘက် မျက်နှာမူလျက်..မျက်စိကို မှိတ်ကာ ပါးစပ်မှ လှုပ်စိလှုပ်စိနှင့် ရွတ်ဖတ်နေလေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူအာရုံပျက်မည်ဆိုးသဖြင့် နဘေးနားခုံတွင် အသာဝင်ထိုင်ကာ သူရွတ်ဖတ်မှုပြီးသည်အထိ စောင့်နေ၏။
ရွတ်ဖတ်သံ တိုးတိုးလေးဖြစ်သဖြင့် ကိုမောင်ဗြိက အသံကို သေချာနားထောင်ရန် ကျွန်ုပ်အား အချက်ပြသည်နှင့် ကျွန်ုပ်လည်း ကပ်ပြီး နားထောင်မိသောအခါ ဘုရားလူကြီးအဘသည် လွန်စွာမှ ထူးဆန်းသော ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုနေသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းကြားရပါတော့သည်။
''ဖယောင်းတင်ဒါ…ရွှေအမှိုက်တင်ဒါ..လင်းနို့ချေးတင်ဒါ..အလှူခံသေတ္တာ…သေတ္တာ..တင်ဒါ..တင်ဒါ..တင်ဒါ''အတန်ကြာသော အဘသည် ရွတ်ဖတ်မှုကို ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဘက်လှည့်လိုက်လေ သည်။
''သြော်..ဘယ်သူများလဲလို့ ကိုမောင်ဗြိ တို့ပါလား…..ဘာကိစ္စများလဲဗျ''ကိုမောင်ဗြိ က စကားမဆိုပဲ..လှမ်းမြင်နေရသည့် ဘုရားကြီး၏ ဖောင်းရစ်မဲမဲ ဆီသို့ သာ လက်ညွှန်းထိုးပြလေသည်။
''ဟုတ်တယ်ဗျာ…အဲ့ဒီကိစ္စ ကျုပ်တို့လည်း ခေါင်းစားနေတာပေါ့….ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ပညာရှင်တွေ ကတော့ အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာပဲ..အရင်သူတော်ကောင်းအဘတွေက ရွှေကို ကြေးတွေနဲ့ ရောပြီး ဂျင်းထည့်လို့ မည်းကုန်တာ လို့လည်းဆိုတယ်….ရွှေကို အပြားခတ်ရာမှာ နေဒဏ်လေဒဏ်ခံနိုင် ဖို့ ကြေးရောရတယ်ဆိုလို့အချို့ကလည်း အကြောင်းပြလာတယ်..ဘုရားမှာ သူ့ဘာသာသူ ကပ်ထားတာ သွားခွာတော့ အလှူရှင်တွေ ကဗ္ဗည်းပျောက်ပြီးရင်ထုမနာဖြစ်ကြ မယ်ဆိုပြီး အဘတွေရဲ့ ကျွန်ုယုံတော်ပညာရှိကြီးတွေကလည်း ဆိုတယ်..ကျုပ်တို့ကတော့ ဘာကြောင့်ရွှေတွေက ကြေးလို မဲကုန်လည်း စဉ်းစားမရဘူးဗျာ.. ဒီကိစ္စရဲ့ တရားခံကို ကိုမောင်ဗြိ ဖော်လို့ ''
ကိုမောင်ဗြိ သည် တစ်စုံတစ်ရာကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလျင် သူလုပ်နေကျပုံစံအတိုင်း တင်ပါးကို ကောက်လျက် ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် တဗျစ်ဗျစ်ကုတ်ကာ မျက်လုံးကို မှေးစင်းထား၏။
ဘုရားလူကြီးအဘမှာလည်း ကိုမောင်ဗြိ ထံမှ အဖြေအား ကြည်ညိုသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် ငေးကာစောင့်မျှော်နေဟန်တူသည်။
ခဏ အကြာ တဗျစ်ဗျစ် ကုတ်သံ ရပ်သွား၏။
ကိုမောင်ဗြိ မျက်လုံးများ ပွင့်လာ၏။
''အဘ ပုဂံခေတ်က ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဆိုတာ ကြားဖူးလား''
'' ပြဒါးသေ တဆွေဝ .. သံသေ တပြည်ဝ ဆိုသလို ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဟာ ပုဂံပြည်ကြီးက ရှိသမျှ ကြေးတွေကို ရွှေဖြစ်စေခဲ့လို့ မုဆိုးမတောင် ဘုရားတည်နိုင်တယ်မဟုတ်လားဗျ''
''အခု..ဒီဘုရားကြီးက ရွှေတွေက ပုဂံခေတ်က ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ အစွမ်းကြောင့် ကြေးကနေ ရွှေဖြစ်သွားတဲ့ ရွှေတွေဗျ''
''ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဗျ….ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ က ကြေးတွေကို ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်တော့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲရှိတယ်..အင်္ဂလိပ်လိုဆို အိတ်စပရက်ရာဒိတ်ပေါ့ဗျာ….အခု အဲ့ဒီ ရွှေတွေဟာ သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးသွားတော့ ကြေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲ..ဘယ်သူ့မှာမှ အပြစ်မရှိပါဘူးဗျာ…. တကယ့် တရားခံအစစ်က ရှင်အဇ္ဇဂေါဏကိုယ်တော်ကြီးပဲဗျိုး…''
ထိုအခါမှပင် ဘုရားလူကြီးအဘသည် သက်ပြင်းချလျက်..''ကိုမောင်ဗြိ ကျေးဇူး ကြီးလှပါတယ်ဗျာ..ကျုပ်တို့ အားလုံး အငြင်းအခုံဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ..ကိုမောင်ဗြိ လာမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်..ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်..မောင်မင်းကြီးသား''
ထို့နောက်တွင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘုရာလူကြီး ဧည့်ခံသော မုန့်ပဲသရေစာများကို စားသောက်ပြီးနောက် ဘုရားကြီးအား လက်ျာရစ် လှည့်လည်ပြီး ဂြိုလ်တိုင်အစေ့ ဖယောင်းတိုင်များခွာကာ အိမ်ပြန်ခဲ့လေတော့သတည်း။